Ikiri kọmputa m | Martech Zone
Ihe dika afo isii gara aga, azutara m igwe ihe ngosi ATI nke komputa m. Anọ m na-arụ ọrụ n'akụkụ ọrụ n'abalị ka m wee lie onwe m n'ọfịs m ma nweta telivishọn mgbe m na-arụ ọrụ. Nke a bụ tupu ụbọchị nyocha abụọ, mana ọ rụrụ nnukwu ọrụ ma enwere m ike ile ya na obere enyo na nkuku desktọpụ m.
Oge agbanwebeghi ka m gwa gị eziokwu… M na-eche ogologo oge maka ihe ịga nke ọma na ọ dị ka ọ na-akpali akpali ugbu a. Nke mbu, ebuputara m Ochichi onye kwuo uche ya. Ọ na-arụ ọrụ dịka Feed Reader ma mee ka m mata ya Geekbrief TVIkiri geek teknụzụ stof dị nnọọ mfe na Cali Lewis na-ekwu okwu banyere ya! Nsogbu m na-eso Democracy bụ na ọ gaghị enyocha ihe elere anya na nke a na-enyochaghị nke ọma. N'ihi ya, enweghị m ike ịchọpụta akụkụ nke m nọ na ya. Bye ochichi onye kwuo uche ya.
Fewbọchị ole na ole gara aga, enwetara m oku Joost. Chaị! Ebuuru m ya, ọ masịrị m ozugbo. Ojiji nke ngwa a gbanwere n’etiti ihuenyo zuru oke, windo, na obere onodu ihuenyo - dakọtara nke ọma na iche echiche nke ọma. Nakwa, M hụrụ n'anya ọtụtụ n'ime ihe menu pụtara na-apụ n'anya na mmekọrịta oke oke. Nchịkọta nhọrọ a na-ejikwa opacity eme ihe dị ukwuu, yabụ ị nwere ike ịga n'ihu na-ele ma na-ege ntị na ngosi ahụ n'azụ na-enweghị nkwụsị. Ihe a gha eme ya.
Mgbe inyere ụfọdụ aka enyi na webusaiti nke ha na aru maka onye ahia, ha juru m anya AppleTV. Idem ama akpa mi ke ntatubọk… ye ke geek heaven. Agwara m ha na ọ bụ ụzọ gabigara oke… na agaghị m enyeghachi ya azụ. Apple AppleTV anaghị ekiri telivishọn na kọmputa gị… ọ dị ka ikiri kọmputa na kọmputa gị na kọmputa maka telivishọn gị. Huh? Cheedị Ipod maka Television na nke ahụ ruru AppleTV. The interface dị nnọọ ka iji iTunes ma ọ bụ iPod na ị nwere ike gakọrịta na PC gị.
Ihe m ga - achọ ịmụ bụ otu m ga - esi tufuo ọbá akwụkwọ mgbasa ozi m na ntanetị m na ntanetị gaa na AppleTV n’agaghị enwe mmekọrịta ọ bụla. Enwere m nnukwu ọba akwụkwọ egwu na ebe ahụ na foto anyị niile. Achọghị m ka m nwee ha na mpaghara iTunes iTunes local Naanị m chọrọ ịbubata ha. Ihe ọzọ m chọpụtara bụ na ị ga - ejikọ naanị otu ngwungwu iTunes n'otu oge. M ike na-eche ruo mgbe a na-hacked… Ọ ga-amasị m iji m AppleTV dị ka a na-akọrọ music n'ọbá akwụkwọ nke ezinụlọ ahụ dum (2 Macs, 2 PC). Achọpụtara m nke ahụ onwere onye huru AppleTV n’iru OSXHmmm. Anọ m na-ele anya Apple TV hacks.
Ma ọ bụ ikekwe Joost ga-ejikọta ya na AppleTV n'ụzọ ụfọdụ? Knowsnye maara dust ájá ga-edozi afọ ole na ole na mgbawa a - mana enweghị m ike ichere ịhụ ebe ọ ga-ewe anyị.
Na-agbadata na anwụrụ na-ọzọ ihe Add-On nhọrọ maka nchọgharị. Okpu okpu ka Scoble, ABC dị nnọọ ulo oru ọhụrụ ha telivishọn nchọgharị na… WOW. Nkọwa ya dị egwu ma interface ahụ dịkwa mma. Ugbu a ọ bụrụ na ha ga - enweta ngosi ụfọdụ kwesiri ileba anya!
Tags: abc telivishọncali lewiskọmputa telivishọnochichi onye kwuo uchegeekbrief igwe onyonyokwụsịvideo streamingtelivishọn
Nke a kwesịrị a blog post… Daalụ, Kathy!
chaị .. dị jụụ. Joost na-ada nnọọ obi ụtọ, akara beta ha dị ka ọ dị ala n'oge ahụ .. na eme nzuzu.
Ha nwere mpempe akwụkwọ ịkpọ òkù mana, ọ dị nwute, a na-anabata m naanị akwụkwọ ịkpọ òkù 0! Amaara m na ụfọdụ ndị ọzọ enweela ike ịkpọ mmadụ 5… ọ bụghị m. Y’oburu na onu ogugu a gbanwee, a ga m acho itinye gi!
M onwe m kwa!
Naanị m ka Joost kpọrọ m, mana ọ bịara na ngwanrọ ha anaghị akwado Power PC. Ndidi!